Gbasara anyị - Ningbo Huayu Network Technology Co. Ltd.
Choputa ihe banyere Nomi
8 zuru ezu set nke
jiri aka ya mepụta ọdịnaya nkuzi.
Adgbaso isi echiche nke omenala mgbanwe, asụsụ mbụ, anyị ịmụta isi mode nke Teachers na China, Mmụta gburugburu ụwa na-eduzi Chinese ozizi.
Ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 500 na-amụrụ anyị asụsụ Chinese
Anyị Otu na-ọtụtụ, mmekọrịta dabeere isi izi ngwaahịa na e ọma ulo oru na ọtụtụ mba gburugburu ụwa na ebe nile otuto site esenidụt ụmụ akwụkwọ.
1200 Nomi Chinese online ejiriwo ihe karịrị awa 12,000 nke oge nkuzi na ntanetị.
Gini mere anyi ji amu Chinese na Nomi?
Usoro mmụta obi ụtọ ：N'ebe a, ị ga-ezute klas mmekọrịta kachasị atọ ụtọ. Anyị na-eji nkuzi ọnọdụ, egwuregwu na usoro ndị ọzọ iji mee ka ụmụaka mụta ma hụ ndị China n'anya. Otu nkuzi otu na otu, otu maka klaasị anọ dị obere, na-eme ka mmụta ụmụaka dị iche iche.
Ọtụtụ ụdị ọmụmụ: N’ebe a, ị nwere ike ịchọta ihe ọmụmụ dabara adaba. N'agbanyeghị na ị na-amalite ọkọ ma ọ bụ ndị China toro eto, ị nwere ike ịchọta ezigbo usoro ebe a. Zero Basic Chinese, ọgụgụ, ide ihe, ikwu okwu, ikwu okwu eserese, HSK, AP Chinese ... Enwere usoro ọmụmụ mgbakọ na mwepụ maka ị họrọ.
Mmụta mmekọrịta ọha na eze: N’ebe a, ị gaghị ahụ naanị onye nkuzi na-atọ ọchị, kamakwa inyere nwa gị aka ịchọta onye ya na ya ga-amụ ihe, ka ị ghara ịnọ naanị gị ịmụ asụsụ Chinese.
Ezigbo ndị nkụzi:N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ụdị ndị nkuzi niile, na-atọ ọchị, jiri nlezianya, nwee ndidi, sie ike ma dị njọ ... Enweghị mkpa ichegbu onwe gị gbasara ndị nkuzi na-aghọtaghị ụmụaka. Anyị Chinese nkụzi niile nwere mba ọzọ izi ahụmahụ. Ọzụzụ nkuzi zuru oke na-eme ka ndị nkuzi anyị mara mma.
Ndị ahịa na-aza ajụjụ ozugbo: N'ebe a, ị ga-ezute ndị ahịa ndị kachasị nwee ndidi. Ọ bụrụ na ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị nne na nna na-enwe nsogbu ọ bụla, ndị nkuzi na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa ga-enyere gị aka, ka usoro mmụta nwatakịrị ahụ wee dịkwuo nro, ka nne na nna wee nwee ntụkwasị obi karị.
Onye nkuzi anyi
Ndị nkuzi kpakpando
Miss Becky, si China, nwere nzere bachelọ na agụmakwụkwọ mba China. Ọ na-akụzi nkuzi Chinese na mahadum ma nwee ọmarịcha nkà ndị China. Enwere m ihe dịka afọ 4 nke izi ihe. Otu oge, m kụziiri ụmụ akwụkwọ nọ na Maldives asụsụ Chinese ma sonye na mmemme mgbanwe asụsụ China nke ụlọ akwụkwọ mba ofesi na United States.
Onye nkuzi klas pụrụ iche
Mazị Li si China ma nwee nzere bachelọ. Ọ nwere ahụmịhe izi ihe bara ụba ma nwee ọ enjoụ iso ụmụaka arụ ọrụ. Ọ ga-enye ụmụ akwụkwọ ahụ klaasị mara mma ma mee ka ha nwee obi ụtọ ịmụ ihe. Li nwere ike ijikọ usoro nkuzi TPR ahụ n'ime nkuzi n'ịntanetị ma nyere ụmụ akwụkwọ aka ịghọta ọdịnaya ahụ. Ọ dị mma n'iji mmetụta ọhụụ, ma ọ bụ ike ma ọ bụ ijide bọọdụ, ọ nwere ike iji akara ngosi iji dọta uche ụmụ akwụkwọ. Ọ ga-agba ụmụ akwụkwọ ya ume ka ha kwuo okwu ma jiri ahịrịokwu zuru oke mee ihe mgbe niile.
Jo si China ma nwee nzere bachelọ na International International Education. Jo nwere afọ 4 maka ahụmịhe nkuzi, gụnyere nkuzi na ụlọ akwụkwọ praịmarị na obere. O nweghi ike ichere ịhụ gị. Willmụaka ga-enwe mmasị ịmụ ihe na Jo. Jo na-ele anya ihu umuaka mara mma na klaasị Nomi. Bịa sonyere ya!
na-ele anya izute gi na klaasị Nomi!